Health Archives - Page2of5- Internet Sansar
भुलेर पनि नगर्नुस् यी १० गल्ती, तपाईंको दाँत बिग्रन्छ
October 12, 2019	Health Comments Off on भुलेर पनि नगर्नुस् यी १० गल्ती, तपाईंको दाँत बिग्रन्छ
१. नियमित परीक्षण नगर्नु : नियमित रुपबाट परीक्षण दाँतको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । दाँतमा पीडा, सडन, सेन्सिटिभिटी हुनेबेलासम्म नकुर्नुस् । त्यसैले वर्षमा एकपटक डेन्टिस्टसंग परीक्षण गराउँनुपर्छ । यसबाट रोग निम्तनुअघि नै रोकथाम गर्न सकिन्छ ।२. समस्या तत्कालै भुल्नु : कुनै पनि समस्याबाट आराम मिल्नेबित्तिकै बिर्सने बानी खतरनाक साबित …
कपालको चाँया हटाउने घरेलु विधि
October 12, 2019	Health Comments Off on कपालको चाँया हटाउने घरेलु विधि
– एक कप दहीमा एक कप बेसन मिलाएर कपालमा राम्ररी लगाउने र दुई घण्टापछि राम्रोसँग धुने ।– अमला र रहरको रिठ्ठालाई बराबरी मात्रामा मिलाएर टाउकोमा लगाउने र यसको दुई घण्टापछि धुने ।– नुहाउनुभन्दा एक घण्टा अगाडि सँधै कागतीको रसले टाउको मालिस गर्ने ।– कपालमा नियमित रुपले नरिवलको शुद्ध तेल लगाउने …
सावधान ! स्मार्टफोनले बनाउँछ कान नसुन्ने बहिरो
October 12, 2019	Health Comments Off on सावधान ! स्मार्टफोनले बनाउँछ कान नसुन्ने बहिरो
काठमाडौं । चर्काे आवाजले कानमा ध्वनी सुन्न नसकिने कमजोर बनाउँछ । तर, स्मार्टफोनले त मान्छेलाई बहिरो बनाउने शोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका छन् ।स्मार्टफोनबाट चर्काे आवाजमा संगीत सुन्दा कानमा सुन्ने क्षमताको कमी हुने र बहिरो समेत हुन सक्ने कुरा पत्ता लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा विश्वमा …
यी हुन ग्यास्ट्रिकबाट बच्ने पाँच उपाय
October 12, 2019	Health Comments Off on यी हुन ग्यास्ट्रिकबाट बच्ने पाँच उपाय
ग्यास्ट्राइटिसको समस्यामा पेटमा ग्यास बन्छ । यस्तो अवस्थामा फेट फुल्छ र पीडा हुन थाल्छ । यसैले सबैभन्दा पहिला कस्तो खाद्यपदार्थ लिनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।ग्यास बनाउने खाद्यपदार्थ नखानुस्-ग्यास्ट्राइटिस समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, ग्यास बनाउने खालका खानेकुरा । केक, कार्बोनेटयुक्त सामग्री, अमिलो फल, काउली, बन्दा, सुपारी पेटमा ग्यास बनाउने …
गर्भवती हुँदा यि खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस् !
October 12, 2019	Health Comments Off on गर्भवती हुँदा यि खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस् !
काठमाडौं । महिलाहरुका लागि गर्भावस्था अत्यन्त समवेदनशील अवस्था हो । यो बेला महिलाले खानपिन संगै स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी महिलाको हरेक कुरा बच्चासंग जोडिएका हुनाले सर्तक हुनुपर्छ ।यस्तो महिलाले पोषणयुक्त खाद्य पदार्थहरु खाने गर्नुपर्दछ । मुख्यतया पाँच प्रकारका खाद्यपदार्थहरु सन्तुलित मात्रामा खाएमा गर्भवती महिला संगै जन्मने शिशुलाई समेत …
थाहा पाउनुहोस् ! मानव जीवनमा हर्टअटेक कतिवेला हुन्छ ?
October 12, 2019	Health Comments Off on थाहा पाउनुहोस् ! मानव जीवनमा हर्टअटेक कतिवेला हुन्छ ?
काठमाडौं । मानव जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मुटु हो । जीवनमा आश्चर्यजनक घटनाले मानव हृदयघात (हर्टअटेक) भएर ज्यानै जाने गर्छ ।हृदयघात कतिबेला हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन् । तर अब चिन्ता नलिनुस चिकित्सकले हर्कअटेक सम्भावना र कतिवेला हुन्छ भन्ने विधी पत्ता लगाएका तर यो विधी अनलाईन माध्यमबाट हुनेछ ।तपाईले आफ्नो …
सुन्तला किन खाने ? जानी राखे राम्रो
October 12, 2019	Health Comments Off on सुन्तला किन खाने ? जानी राखे राम्रो
काठमाडौं । सुन्तला स्वादका लागि मात्र नभइ स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्तै लाभदायक छ । मानिसहरू सुन्तलाभन्दा भिटामिन चक्कीतिर आकर्षित भइरहेका छन् ।सुन्तला भिटामिन ‘सी’को प्रमुख स्रोत हो । भिटामिन चक्कीको सट्टा सुन्तला खानु स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवै हिसाबले फाइदाजनक हुन्छ । बढी तौल भएका व्यक्तिकालागि पनि पर्याप्त मात्रामा सुन्तलाको प्रयोग …
यस्ता ७ व्यक्तिले अनार भुलेर पनि नखानुहोला
October 12, 2019	Health Comments Off on यस्ता ७ व्यक्तिले अनार भुलेर पनि नखानुहोला
अनारको बोक्राको पनि यति धेरै फाइदै फाइदा-हरेक फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ। तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। तर यी ७ व्यक्तिले अनारले खानु राम्रो हुदैन। स्वस्थ्यमा सुधार आउनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ।१, तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई …
October 11, 2019	Health Comments Off on अद्भुत रोगहरु सजिलै नियन्त्रण गर्ने यी हुन् ल्वाँङका १० गुणहरू
काठमाडौं, ल्वाँङलाइ नेपाली खानामा बिशेष ठाउँ दिइएको छ । यसको उपयोगबाट खानामा स्वाद आउँदछ, साथसाथै यसमा केही महत्वपूर्ण गुणहरू समेत रहेका हुन्छन । यसको उपयोग तेल तथा एन्टीसेप्टिकका रुपमा गर्ने गरिन्छ । ल्वाँङमा तपाइँको स्वास्थ्यलाइ तन्दुरुस्त राख्नका लागी कयौं गुणहरू रहेका हुन्छन ।ल्वाँङमा हुने एक बिशेष प्रकारको स्वाद यसमा हुने …
नेपालमा धेरैमा देखिने थायराइड रोग किन लाग्छ ? थाहा पाउनुस् यसका लक्षण
October 11, 2019	Health Comments Off on नेपालमा धेरैमा देखिने थायराइड रोग किन लाग्छ ? थाहा पाउनुस् यसका लक्षण
थायराइड नोड्युल भनेको थायराइड ग्रन्थीको असामान्य वृद्धि हो । थायराइड ग्रन्थी घाँटीमा पाइने गरिन्छ । यो ग्रन्थी सास नली र ट्रेकियाको चारैतर्फ पुलतीको आकारमा टाँसिएको हुन्छ । थायराइड नोड्युलका कारण थायराइड क्यान्सर हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यदि समयमा यसको निदान नगरेमा यसको आकार बढ्ने गर्दछ र यो बाहिरबाटै देखिन्छ …